maxamedsheekafguun Juunyo 5, 2017 Uncategorized, waxbarasho
Barnaamijkii maalinta isniinta “Aqoon laawe eed maleh”, ee bogga dhugasho, waxaan ku soo qaadanaynaa maysiga dhiga.
Rafiiso: waa neef geel, Adhi, Lo’ ama dameer ah oo aan inyar oo ceeb ah habayaraatee lahayn. oon il la’ayn, oon naas la’aayn, oon jirranayn, oon aad u yarayn, waa rafiiso oo Zakadaa ku bixi karta, oo arrafadaa la qali karaa IWM.
Maquuno: waa neef iska caadi oo hadduu rabo ceebleh. tusaale, hal candhoola ah rafiiso galimayso laakiin maquunay gali, Sac tood ah oon la maali karin, sidoo kale waa maquuno.
(Siloo fila ka roone) ayay soomaalidu dhahdaa iyadoo ula jeeddo ninka adhiga leh. (Ninka adhiga leh waa si loo fila ka roone), maxaa yeelay, waxaa ugu wacan, adhiga waa iska baraka badan yahay, xilliyada abaaraha ah qaarkood, haddii loo dadaalo, waxaaba laga yaabaa in uu ama neef iska shidhaysto ama neef u dhalo amaba suuqa gaysto xilli xoolaha kale aan loo hawoonaynin.
Dadka lo’da lehna waxay degaan meesha biyaha aadka ugu dhaw, waa ta la yidhi:
-Lo’ waa caws iyo biyo ku nool”. soomaalidu mar kale waxay tidhaahdaa:
-Sac dhaqaalkiis waa inuu lugaha dambana biyaha kula jiro lugaha horena cawska kula jiro”.
-Baadi lo’aad biyaa loo fadhiistaa”.
-Lo’ey nimaan ku horraynin yuusan kuu heesin
-Wax ayn biyo i siinin lo’ ima siinin” IWM.
Dadka adhiga lehna waxay degaan meesha u dhaxaysa geellayda iyo lo’leyda, waa meel biyaha aan aad ugu dhawayn, aadna uga fogayn, oo geeluna markuu soo aroorayo socod ku soo dhaafo, lo’duna aysan fooftaanba ku gaadhin. Marka waa meel iska yara fiican, oo adhiga saxar ku filan u leh. Wuu ku barbixi karaa, meelahaas dhexdhexaadka ah, haweenkuna dameeraha way ka soo dhaansan karaan, oo waa meel aan aad biyaha uga sii fogayn, aadna ugu sii dhawayn, sida lo’leyda. Sidaa daraadeed ayay u dheheen “Adhi nin leh waa si loo fila ka roone”.
Waxay gabdhuhu adhiga ku daajiyaan heeso u gaar ah. markastana uma heesaane galabti kaliya ayay ku mayracaan xilliga barwaaqada ah. Sababta galabti loogu heeso, maxaad ka taqaanaa?
-Waa waraabaha iyo wixii cadaw ahba inuu kaga leexdo oon cidla la moodin adhiga,
-Waa in uu adhigu wehel dareemaa, si uu daaqa si fiican uga bogto, illeen xeraa sugiye,
-Si uu adhigu u xasilo, oo qorraxdu ugu dhacdo,
-Iyo gabadha heesaysa laftigeeda oo madaddaalo ka dhiganaysa, oo cajiska isaga tiraysa, iwm. Sababahaas ayaa heesta keenaysa.
Gabadh oo dhan adhiga uma heestee, waa tii fiidhoon ee suugaantana jecel oo kaliya midda ka dhex shanqadha markuu casarkii adhigu xidhadh maanyo iyo gahaydh leh dhex shabbaaxayo.
Dhawr siyaabood ayay gabdhuhu adhiga ugu heesaan markuu casarki mayracanayo: Mar waxay ku dhiirri galigalinayaan in uu si fiican u daaqo, Marna waxay gabadhu adhiga heeta ugu muujinaysaa, in ay heegan u tahay, Mar waxay u sheegaysaa in uusan xidhadhka ku kala hadhin.
1:Si uun adhigu daaqa uga bogto waxay gabadhu leedahay.
“Maydha maydhoy” hoohobobe
“Makhri bood baad” …..
“Meel u hoyaniye” …..
“Mayracoo miro” …..
2. Markan waxay tusaysaa in ay gabadhu adhiga uun heegan tahay waligeed
“Meera meeraay hoohohobe
Meeray maradii …….
meel ma dhiganine …….
Sidi maraq geel ……
Yaygu maran tahay” ……
3: Inuu ku xasilo daaqa, illeen makhrib ayuu xaroon oo sida geela ma mirtee.
“Gahaydh maanyada” hoohohobe
“Geelu kuu nacay” ………
“Ha gadhgawdhine” ………
“Aayar googoo”. ………
“Bogga hoosiyo” ……
“Bayda qaban jiray” ……
“Yayn ku boobine” ….
“iiga soo badi”. …..